Ngaba usakhathazekile ngokungafumani umatshini wokusika ofanelekileyo? Ngomhla ka-Meyi kulo nyaka, inkampani yethu ye-jiahao yenzele umatshini omtsha wokusika ipetroli, onendlela ekhethekileyo yokuyila yanamhlanje, enokuba nefuthe kumbono wakho.
I-JH350 yepetroli yediskhi yokusika ngokulula isika ikhonkrithi, ilitye, isitena, kunye neepavile, kunye ne-14 ″ yedayimane. Imoto enamandla ye-52cc / 1900W yenza umsebenzi olula wezona zinto zinamandla kwaye kuba iyisarha yepetroli, isenza ukuba silungele ukusebenza kwiindawo ezingezizo zombane. Izibambo zenkxaso ye-ergonomic zibekwe ngokufanelekileyo kwimilinganiselo efanelekileyo xa kusikwa kunye nendlela yokutshixa yokutshixa kuthetha ukuba ukutshintshwa kwentsimbi kuyakhawuleza kwaye kulula. Eyona ndlela ilungileyo kulondolozo oluphezulu, ukusika iidiski zombane
Irobust & Versatile
I-petroli yokusika idiski yenza umsebenzi olula kwezona zinto zomeleleyo kwaye isika ngokulula ikhonkrithi, ilitye, izitena, ipavumenti kunye nezinye izinto zamatye.
Ngokukhuselekileyo nangakumbi kuqoqosho
Ilungele ukusika i-disc yokusika ephezulu! Injini yepetroli enzima ithetha ukuba akukho sidingo sombane, sinokuthatha umatshini siye naphina apho usenza khona, siyenza ilungele umsebenzi kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Kulula ukuyisebenzisa kwaye uphathe
I-ergonomic soft-grip, middle-position, front and rear handles handles zibekwe ngokufanelekileyo ukunceda ukusika ngokuchanekileyo kuzo zombini iindlela ezithe tye nezithe nkqo. Unogada uhlengahlengisa ngokupheleleyo ukwenza ukuba kube lula ukuyisebenzisa kwaye uyisebenzise.
Amandla aKhulu okusika
Unikwe i-intshi ye-14 intshi yedayimane, ukusika ubunzulu ngokusika okuqhubekayo / okwenyukayo. Isixhobo sokutshixa isixhobo sivumela ukutshintshwa kwentsimbi ukuba kukhawuleze kwaye kube lula.
Ibanga le-52 cc lobuchule, i-injini yokubetha kwe-2
I-valve yokunciphisa ukunyanzelisa i-starter
Umatshini wokumisa okomzuzwana ubuyela ngokuzenzekelayo kwindawo ethi "on"
I-bulb ye-Purge ibonelela ngepetroli entsha
Intloko yokusika eguqulweyo inokuhanjiswa ukusika kufutshane nodonga okanye kufutshane emhlabeni
Ukukhupha iadaptha yombhobho ngokukhawuleza ukuze uqhoboshele ithumbu lonikezelo lwamanzi
Icala lokufikelela lebhanti elijingayo ukulungiselela uhlengahlengiso olulula lwebhanti
Ulawulo lwevalve yamanzi oluthamba ukuhamba kwamanzi
Inkampani yethu iimveliso ezikumgangatho ophezulu, inkonzo elungileyo kunye nexabiso kukhuphiswano, abathengi ukuseka igama elihle, bonke abasebenzi bethu ngokunyanisekileyo sinethemba lokuba igama elihle ekhaya nakumazwe aphesheya ukuseka ubudlelwane bamakhasimende zexesha elide kunye nentsebenziswano macala onke kunye developmeng eqhelekileyo. Sibamkela abathengi ukusuka ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba batyelele okanye inkampani bathethathethane ngeshishini, benze intsebenziswano ebanzi, benze ikamva elihle ngokudibeneyo!